Soo saaraha Jack Hydraulic & Alaab-qeybiyeyaasha Crane Engine | EPONT Jack
Soosaaraha Haydarooliga Jacks ee Xirfadlaha ah
Shirkaddu waxay inta badan ku hawlan tahay cilmi-baarista, horumarinta, wax-soo-saarka iyo iibinta wiishashka injiinka ee kala duwan, jaakadaha haydarooliga iyo alaabta mashiinnada haydarooliga.
EPONT Jack waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha Porta Power Jack, waxaan soo saareynaa noocyo kala duwan oo Porta Power Jack alaab tayo fiican leh oo leh hufnaan iyo saxnaan gaar ah. Alaabtayadu waxay u hoggaansamaan shuruudaha kala duwan ee warshadaha laga soo bilaabo tobanaan sano, waxaan kor u qaadnay qalabkayada wax soo saarka iyo awoodaha maareeyayaasha aqoonta leh, injineerada iyo sidoo kale farsamoyaqaannada.
Adeeg habaynta ee shuruudaha ganacsiga gaarka ah ama caqabada ah.
Mashiinka Epont waa ururinta Injin Crane kala duwan, Hydraulic Jack, Floor Jack 3T, Gudbinta Dabaqa Jack kaas oo ah shirkad u gaar ah jirka ee cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta.
Sifooyinka tayada leh iyo kuwa waara ee Porta Power Jack waa mid amaan mudan oo ay qadarinayaan macaamiisheena ku kala sugan qaybaha kala duwan ee suuqa. Badeecadaha kala duwan ayaa si fiican ugu habboon macaamiisha sababtoo ah Porta Power Jack ee aan bixinay waxaa loo keenay si loo qanciyo shuruudaha kala duwan ee macaamiisha. Waxaan hubineynaa in qiimaha adeegyadeena uu yar yahay.
Waxaan leenahay horumarinta xirfadeed, kooxda wax soo saarka iyo kooxda iibka heer sare ah.
Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2006, taas oo ku taal bartamaha magaalada Yangtze webiga delta dhaqaalaha magaalada, Jiaxing, halkaas oo u dhow Shanghai, Hangzhou, Ningbo, magaalada Suzhou, iwm . Shirkaddu waa ururin noocyo kala duwan oo Injineer ah, Dabaqa Jack 3T, Gudbinta Dabaqa Jack kaas oo ah shirkad jidheed oo ku takhasustay cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta.